Izixhobo zomqokeleli wothuli | I-China Izixhobo ze-Dust Collector Factory kunye nabaXhasi
IKhabhinethi yokuLawula uMbane oPhezulu kunye noQeqesho loMbane oQokelele kwimveliso yokuqokelela uthuli switchgear, ulawulo lwekhabhathi, umbane ophakamileyo wombane ombane olawulo lwekhabhinethi, inkqubo yolawulo oluzenzekelayo ye-PLC, inkqubo yolawulo lwe-microcomputer oluzenzekelayo, inkqubo yolawulo lwe-microcomputer oluzenzekelayo inkqubo yolawulo. Itekhnoloji ye-Pneumatic ithatha isiguquli somoya njengomthombo wamandla kunye nomoya oxineneyo njengombane osebenzayo ukwenza ugqithiso lwamandla ...
I-DMF-Y i-Electromagnetic Pulse Valve: I-DMF- Y i-valve ye-electromagnetic pulse valve yi-valve efihliweyo (eyaziwa ngokuba yi-valve efakwe), efakwe ngqo kwibhokisi yokuhambisa igesi kwaye ineempawu zokuhamba kakuhle. Ukuphulukana noxinzelelo kuncitshisiwe, kufanelekile ukuba kwenzeke umsebenzi kunye noxinzelelo lomthombo wegesi ophantsi. Ilungelo le-Angle solenoid pulse valve yi-actuator kunye necandelo eliphambili lokucoca i-jet isixhobo sokucoca uthuli, esahlulahlulwe ngokweendidi ezintathu: uhlobo lwe-Angle elungileyo, ...
I-DMF-Z Ekunene kwe-Angle ye-Electromagnetic Pulse Valve: I-valve ye-DMF-Z ye-electromagnetic pulse valve yi-valve ye-angle efanelekileyo kunye ne-angle ye-90 degrees phakathi kwe-inlet kunye ne-outlet, efanelekileyo ukufakela kunye nokudibanisa kwebhegi yomoya kunye ne-tube yokuqokelela uthuli. . Ukuhamba komoya kugudile kwaye kunokubonelela ngokucoca uthuthu ukubetha komoya ngokubhekisele kwimfuno. Ilungelo le-Angle solenoid pulse valve yi-actuator kunye neyona nto iphambili kwisixhobo sokucoca uthuli lwe-jet, olwahlulahlula ...
Isakhelo "yi-rb" yebhegi yokuhluza.I-welding kanye ngesixhobo sokuzenzekelayo se-welding.i-welding iqinile kwaye imbonakalo igudile kwaye ithe tye, ukuze ingxowa yeefilitha ingonakali. Kulula kwaye kulula ukuyifaka kwaye Ukugcina izinki okanye inkqubo yokutshiza ngeplastiki isetyenziselwa unyango lwasemva komhlaba. Isakhelo sokususa uthuli sesinye sezona zixhobo ziphambili zokususa ingxowa yelaphu. Inokuhambelana nesithandathu, isibhozo, ishumi, ishumi elinesibini, ishumi elinesithandathu, ishumi elinesibhozo, amashumi amabini ...
Uhlobo lweBhegi luQokelele uthuli, Ipholiyesta yePhepha leenaliti-eziQhelekileyo, Isamente Uqokeleli Uthuli, I-Fibreglass yeenaliti-Isihluzi seFilter yeFilter, Isihluzi seFelt Bag, Ingqokelela yothuli,